कथित यात्राका थकित यात्रीहरु | Purna Oli
कथित यात्राका थकित यात्रीहरु
Posted on October 3, 2018 by Purna Oli in कथा, संस्मरण |0Comments
“जाम् जाम् गुरुजी !”
“यात्री सबैलाई बस्न लायौ ? ढोका लगायौ पछाडितिरका सबै ?”
“लाएँ गुरुजी, लाएँ !”
“पानी, ड्राइफुडहरु हाल्यौ त ?”
“पहाडतिर जानलाई कसैले तराइको पानी, खाजा बोक्छ ? बाटोमै पाइहालिन्छ नि गुरुजी, खानपिनका चिजबिज जे खोजे पनि ।“
“ल ल ठीक छ । हामी सबै नयाँ छौँ, तिमीले नै यो यात्रालाई सक्दो सुविधाजनक बनाउनुपर्छ है ।“ गुरुजीले यात्राको बाह्रौँ घण्टी बजाउनुभयो ।
बिहानको १० बजे गाडी नं बा.१३ च ३६१३ बाट रुकुमतिरको हाम्रो यात्रा श्रीगणेश हुन्छ तुल्सीपुर बसपार्कबाट । खम्बु भाइ टर्कीतिरको यात्रामा रहेकोले उनको गाडी भाडामा लिएर हामी रुकुम हानिँदै छौँ । हेमन्त रावलले मेरै गाडीमा जाउँ न त भन्दै हुनुहुन्थ्यो । समस्या कस्तो भयो भने न उहाँ हाम्रो गाडीमा अटाउने, न त हामीहरु उहाँको गाडीमा अटाउने ।
पातुखोला पुरेर बनाइएको बसपार्कलाई पछाडि छोडेर हामी तुल्सीपुरबजारतिर उक्लँदै छौँ । बजारतिर मान्छे, रिक्सा, गाडी, मोटरहरुले धुमलिएको भेल तर्नै सास्ती हुने गरी उर्लिएको छ । दशैँतिहारको समय, चारैतिरका मान्छेहरु ओइरिएका छन् । त्यही भेलमा बग्दै गरेका हर्कभाइ सल्यानरोडको चोक वारिपट्टि नै देखिन्छन् । तिनचारदिनसम्म ‘कोरियातिरै छु’, भनेका मान्छे यहाँ पो टुपुल्किएछन् । उनी हाम्रो गाडी देखेर हात हल्लाइरहेका छन् । मलाई चिने कि ?
दशैंको समयमा अरु लोकल बसहरुको यात्रा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । टिकट पाएर पनि बसमा उठीउठी वा छतको यात्रा गर्नुपर्छ । यस्तै सानासाना गाडी भेटिएमा यात्रा सुविधाजनक पनि हुने र छिटो पनि पुगिने आशामा बाटोबाटोमा बसेका हुन्छन् रुकुमतिरका यात्रीहरु ।
“बायाँ मोडौँ, गुरुजी ! सिधै पूर्व गए घोराही पुगिन्छ । सल्यान तथा रुकुमतिर जानलाई अब हामी उत्तरतिर लाग्नुपर्छ ।“
मैले साइड हेरेर ‘ढ्याक्–ढ्याक्‘को संकेत दिएपछि गाडीले बायाँतिर मोडिएर अब रुकुमतर्फको यात्राको दिशा पक्रिइसकेको छ, तर गति पक्रिन सकेको छैन ।
अलिकति अगाडि बाटोको किनारतिर भीम वली सपरिवार देखिए । त्योभन्दा माथि रम्भा म्याडम नातिहरुलाई च्यापेर गुन्टा कसेर छेउ लागेर गजधम्म बसिरहेकी रहिछन् । त्यहीँनेर चन्द्रा वली पनि दाङतिर झरेकी रहिछन् क्यारे गाडी रोक्न हात हल्लाउँदै छिन् । दौडधुपले असिनपसिन देखिन्छिन् उनी ।
म भने छातेटोपी ढल्काएर गलबन्दीले मुख छोपेर गुरुजीको देब्रेपट्टिको सिटमा बसेको छु परिचितहरुले नचिनून् भनेर । चिने कि यिनीहरुले ? सातो जान्छ मेरो ।
अलिकति माथि जयन्ती थापा सिलवाल र सन्जु दाहाल म्याडमहरु एकअर्काको हात समात्दै टहलिएको पनि देखिए । सायद दाङसम्म मात्रैको घुमघाम थियो कि ? “कहाँसम्मको यात्रा हो, म्याडम ?” जिब्रोबाट फुत्किनै आँटेको बोली मुखभित्रै थामथुम पारेँ ।
जागिरतिर बढ्दो असन्तुष्टीको कारणले मैले भर्खरै राजिनामा दिएर यो पेशा अंगाल्ने सोचेको छु । म नयाँ जागिरको संघारमै छु । आफूलाई बरु गाइड सम्बोधन गरुन् भन्ने चाहन्छु तर मेरो गुरुजीले मलाई काँचै खलासी नै भन्छन् र सोहीमुताबिकको व्यवहार पनि गरिरहेका छन् । बाटोमा देखिने परिचितहरुले साविकको जागिरी छाडेर खलासीको काम गरिरहेको थाहा पाए भने ? यही भयवश् परिचितहरुको आँखा छल्ने प्रयत्न गर्दैछु । उनीहरुको आँखाबाट छलिनुको अर्को फाइदा के छ भने चिनेकाले फाइदा उठाउँदै लिफ्ट मागे भने मिल्दैन भन्न नपरोस् ।
“के सोच्दै छौ भाइ ? पहाडी बाटो कतिखेर शुरु हुन्छ अब ?”
“७/८ किलोमिटर हो । अब दशपन्ध्र मिनेटमा ।“ म गुरुको आँखातिरको सट्टा कानतिर हेरेर जवाफ दिन्छु, बाध्यता यस्तै छ ।
“अनि रुकुम पुग्न ?”
“त्यस्तै एकसय पैँतीसछत्तीस किलोमिटर जति होला । आफ्नै गाडीमा सरासर गए चारपाँच घण्टा हो ।“
“दिउँसोको नास्ता खान रुकुम नै पुगिने भइयो उसोभए ।“ कमलसरको अड्कल ।
“हेरौँ । जाँदै गरौँ । मौसम त सुधार भैसकेको बुझेको छु ।“
“मतिर मात्र हेर्ने होइन । बाहिर साइड पनि हेर, अगाडितिरको अवस्था पनि बुझ र यात्रीहरुतिर पनि आँखा पुर्‍याउँदै गर है खलासी भाइ । तीनवटै कुराहरुमा तालमेल भएन भने यो यात्रा खल्लो हुनेछ बुझ्यौ ?”
म यस यात्राका यात्रीहरुतिर फर्कन्छु ।
“चिन्छौ नि आफ्ना यात्रीहरुलाई ? चिन्दैनौ भने सर्टको रङअनुसार नाम दिए पनि हुन्छ उहाँहरुको । बाटोमा छुटेमा गन्ती गर्नभन्दा सजिलो हुन्छ क्या !”
“किन नचिन्नु ? मजासँग चिन्छु सबैलाई ।“
“ल भन त उसोभए, को को हो उहाँहरु ?
“हजुरको सिधा पछाडि बस्ने खैरो चेक सर्ट लगाउने निबन्धकार युवराज नयाँघरे सर हुनुहुन्छ । एक हातको ताली, काठमाण्डौलाई कोर्रा, औँलाओँलामा अष्ट्रेलिया आदिका रचनाकार । मेरो सिधा पछाडि बस्ने गुलाबी टिसर्ट लगाउने जल्दाबल्दा आधुनिक कवि विप्लव ढकाल सर हुनुहुन्छ । च्याउको जङ्गल, प्रोफेसर शर्माको डायरी आदि उहाँका कविता संग्रह मैले पढेको छु । युवराजसरको सिधा पछिल्तिर बस्ने खैरो ज्याकेट र नीलो जिन्स पाइन्ट लगाउने अमर न्यौपाने सर हुनुहुन्छ । उहाँ जनपृय उपन्यासकार हुनुहुन्छ । उहाँको पानीको घाम, सेतो धरति र करोडौँ कस्तुरी मैले पढेको छु । विप्लव सरभन्दा पछि बस्ने सेतो वस्त्रधारी अग्लाअग्ला व्यक्ति कमल ढकालसर हुनुहुन्छ । घोष्टराइटिङ नेपाल र कुन्ज नाटकघरका अध्यक्ष र गो अहेडका रचनाकार पनि हुनुहुन्छ । यो यात्रामा तपाईँहरुलाई ल्याउन भूमिका खेल्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ र त्यो आग्रह मैले गरेको हुँ ।“
“अरे ! अरे ! सबलाई चिन्दा रहेछन् त यिनले त !“
“अनि म ? “
“तपाईँ जुकर्वर्ग क्याफे, प्रेमालय, उनी कथासंग्रहका कथाकार अश्विनी कोइराला सर हुनुहुन्छ । मेरै आग्रहमा तपाईँलाई चालकको सिटमा राख्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको हो ।
“वा रे वा । हो र भन्या ? लुगाको रङ छुट्ट्याएर आफ्ना यात्री चिन्ने खलासी हुन् कि भनेको त यात्रीका आन्द्राभुँडीको रङ नै चिन्ने खलासी परेछन् । जे होस् रमाइलै हुनेभयो यात्रा ।” गुरुजीले ब्याकमिररले यात्रीहरुको अनुहार जाँचेको देख्छु ।
यात्रीहरुका जोरजोर आँखाहरु अभूतपूर्व चनाखा भएका छन् । चारैजनाको गलामा क्यामेरा झुण्डिएको छ । यो यात्रा अहिले बजारकै आसपासमा भएकोले उनीहरु बाहिर देखापर्ने गाउँलेहरुको भेषभुषा र बोलीचालीमा आकर्षित भैरहेका छन् ।
गाडी गोटीखोला पुगेपछि पातुखोलाको किनारैकिनार अघि बढ्दछ । सिधा बाटो बाङ्गोटिङ्गो हुन थालेको छ र बस्ती जङ्गलमा जङ्गलमा परिवर्तन हुँदैछ ।
“अब दश किलोमिटर जतिमा कपुरकोट पुगिन्छ गुरुजी । बाटो साँगुरो छ । मोडैमोडहरु छन् बिस्तारै हाँक्नुहोला । दुर्घटना भइरहने ठाउँ हो !” यो मैले खलासीको कर्तव्य निभाउन चुक्दिन ।
“स्टेरिङ मेरो हातमा छ बुझ्यौ ? नडराऊ । यो हातले अहिलेसम्म कुनै दुर्घटना भएको छैन ।“
यात्रीहरुतिर आँखा पुर्‍याएँ । चारैजना झुङ्न थालिसकेछन् ।
राम्री पुगेपछि गाडीमा ब्रेक लाग्दा चारैजना अगाडि हुत्तिएकोले ब्यूँझिए । डाँडाको पारितिर भन्ज्याङमा एउटा गाउँ देखियो ।
“ल पिसाबसिसाब फेरौँ है । अब गाडी उता रोकिँदैन ।“ मैले उर्दी फिराएँ ।
हात हातमा क्यामेरा भिरेर सबै गाडीबाट ग्वार्ग्वार्ती ओर्लिए । युवराजसर खुट्टा झड्कार्दै बोलेः “ऐया नि बाबाबा… खुट्टै निदाएछ । कुन गाउँ हो त्यो पारिको ?” बजारतिर औँला सोझ्याए उनले ।
“कपुरकोट । त्यहाँदेखि दाङको सीमा समाप्त भई सल्यान शुरु हुन्छ ।“
“एक किलोमिटर जति लाग्ला हैन त्यहाँ पुग्न ?”
“६ किलोमिटर जति बाँकी छ”, अझै भन्दै म कान्लातिर उक्लिएँ । उद्देश्य थियो परिचितले बाटोमै आफूलाई नभेट्टाउन् । माथिबाट उनीहरुको कुरा सुन्दै छु । तत्कालीन कर्म सकेर क्यामेरा ताकिरहेका छन् सबैले ।
“हातैले छोइएला जस्तो छ त्यो बजार । ६ किलोमिटर त कुनै हालतमा छैन ।“ कमलसरले मेरो अनुमानलाई चुनौति दिए ।
अमरसरले पनि, “त्यो बजार त धेरै नजिक पो देखिन्छ त हौ“ भन्दै कमललाई साथ दिए, “६ किलोमिटर त कहाँ हुनु । यस्ता पहाडी ठाउँ त कति घुमिएको छ कति ।“ अमरसरले गाडीबाट झर्दा पनि झोला छोडेका छैनन् ।
“हुनसक्छ । सयौँ पटक हिँडेका होलान् ओली यो बाटो ।“ विप्लवसरले मेरो भनाइको नजिकतिर अमरसर र कमलसरलाई ल्याउन खोजे ।
युवराजसरले पनि “टाढै होला नि त !” भन्दै विप्लवसरकै समर्थन गरे ।
“६ किलोमिटर त छँदैछैन, बरु एकको सट्टा दुई होला !” कमलसरको जिद्दि यथावत छ ।
“दुई किमिमात्र त छैन होला हौ । ६ को सट्टा बरु पाँच होला !” विप्लवसरको पनि नछाड्ने जिद्दि ।
“ल, ल, भयो मैले चारमा मिलाइदिएँ, हुन्छ ?” अश्विनी सर गाडीकै चालक सिटछेउको झ्याल समातेर झुण्डिएका छन् । मानौँ उनले गाडी छोडिदिएमा गाडी त्यहाँबाट भागिहाल्नेछ ।
“बढी त हुँदैन हुँदैन ।“ कमल र अमरको बिरोध छ ।
“घटी त हुँदैन हँदैन ।“ विप्लवसर र युवराजसरको पनि अस्वीकृति ।
उनीहरुको रस्साकस्सी पर्न थाल्यो । बाजी नै थापे । जसले जित्यो उसैले दिउँसोको खाजा खुवाउने गरी ।
केही बेर पहाडको गोर्‍यानमा बगेको पातुखोला फलाबाङसँग नारिएका अरु पहाड राम्रीभन्दा माथिको रानीवनको दृश्य क्यामेरामा कैद गरिसकेपछि गाडी अगाडि बढ्यो । सानासाना टाकुराहरुको गला भएर बाटो घुम्न थाल्यो । मोडैमोड र खोँचैखोँचले गर्दा कपुरकोट पुग्न पन्ध्र मिनेट नै लाग्नेभयो । आफूले बाजी हार्ने लक्षण देखेपछि कमल र अमर चुप लागे ।
“हामी कपुरकोट पुग्यौँ ।“ एउटा बाटो कपुरकोट भन्ज्याङबाट ओरालो लाग्यो अर्को कपुरकोटबाट अझै उकालो ।
“त्यो प्रसिद्ध स्वर्गद्वारीमन्दिरतिर अर्थात् रोल्पा तथा प्युठानतिर जाने बाटो ।“ मैले उकालो बाटोतिर औँल्याउँदै भनेँ ।
“जाऊँ न रोल्पा जाने बाटोतिर अलिकति माथिसम्म ।”
कपुरकोट बजारबाट अलिकति माथि पुगेर वारिपारि हेर्नथाल्यौँ । हामी माथितिर लागेको बेला बसमा आइरहेका देखिए चन्द्रा तथा रम्भाहरु । मैले उनीहरुलाई देखेँ उनीहरुले मलाई देखेनन् हाइसन्चै भो । अर्को माइक्रो बसमा हर्क र भीम पनि देखिए र कपुरकोट नरोकिएर काटिहाले ।
यताउता हेरिसकेपछि हामी तल बजारतिर झर्‍यौँ ।
“खै बाजीको पैँसा ? अब यतै चियाखाजा खाऊँ !” युवराजसरको चिया खाने तलतल बुझियो ।
“खाना खाएर तुल्सीपुरबाट हिँडेको एक घण्टा भएको छैन । अहिल्यै चिया नखाऊँ भो ।“
“जाबो एक कप चिया त बाजी नहारे पनि खुवाइन्छ के । गाडी छोडेर भागिहालौँला जस्तै कति हतार हो यतिविधि ।“ अमरसरको चोटिलो व्यङ्ग्य । युवराजसर र कमलसर अलि परै तरकारी बजारको भाउताउ सोध्दै छन् । थरिथरिका ताजा तरकारीले मात्र ढाकिएको बजारले उनीहरुलाई लोभ्याएछ ।
गुरुजी भने उनीहरुको वादविवादतिर नमुछिई गाडी स्टार्ट गर्दै यात्रीहरुलाई गाडीमा फर्कन संकेतको हर्न बजाउन थाले । सबै यात्रीहरु गाडीमा चढिसक्नेबित्तिकै गाडी कपुरकोट ‌ओरालोतिर कुद्न थाल्यो ।
“हाम्रो यात्रा छोटोमीठो यस्तो होस् कि हाम्रा मनले खिचेका दृश्यहरु धेरै परसम्म आँखैमा नाचिराखून् । जति विलम्ब गर्‍यो उति दृश्यहरु मधुरा हुन्छन् ।“ सायद गुरुजीको हामीप्रतिको व्यङ्ग्य थियो यो ।
“केही गानासाना लाउनू न ओलीजी, यात्राको कुनै मज्जै आएन क्या !” कमलसर अलि रसिक छन् ।
“के गाना लाऊँ ? हिन्दी गाना ?”
“भैहाल्छ नि !” भन्ने कमलजीको स्वीकारोक्ति भुइँमा झर्न नपाउँदै “हुँदैन !”, “हुँदैन !!” “हुँदैन !!!” भन्ने बिरोध स्वरहरुले कमलजीको बचनलाई मुखभित्रै पुर्‍याउलान् झैँ गरे ।
“नेपाली गाना लगाइदिऊँ त ? कुन चाँहि ?”
“हुँदैन ।“ विप्लवसरले पुनः ठाडै विरोध गरे । “यहाँ गीतको पारखी को होला र ? बरु मेरा च्याउका जङ्गलका कविताहरु लगाउनू न ईः“ भन्दै मेरो नाकैमा पेनड्राइभ पुर्‍याउनुभो ।
“तपाईँका कविता मात्र सुनिदिएर हामीले बाटो काट्ने ? उसोभए मेरा निबन्धहरु पनि सुनिदिनुपर्‍यो नि । मैले पनि ल्याको छु के ‘औँलाऔँलामा अष्ट्रेलिया‘ भित्रका निबन्धहरुको अडियो रेकर्ड । यी लानुस् ओलीजी यही लगाइदिनुस् ।“ उहाँले पनि अर्को पेन ड्राइभ तेर्स्याइदिनुभयो ।
“तपाईँहरुका मात्र छन् र रचना ? सेतो धरतिको अडियो रेकर्ड मसँग पनि छ । यी लानुस् !” अमरसरले त भिरिरहेको झोलाबाट डिभिडि नै झिकेर दिनुभयो ।
“डिभिडि नै राख्ने साउण्ड सिस्टम त छैन होला हौ यो गाडीमा ।“
“सिस्टम रहेछ नै भने पनि उहाँको उपन्यास सुनिभ्याउन त कम्तीमा दशदिन लगाउनुपर्ला नि । सुन्या छ, सुन्या छ । बरु मैले घोष्टराइटिङका कक्षाहरु र कुन्जघरका नाटकहरुको भिडियो ल्याको छु । यही सुनौँ ।“ कमलसर पनि के कम !
कमलजीको कुराले गाडीको छत नै उडाउनेगरी हाँसो गुन्जियो ।
“ल, ल, उसोभए अमरजीको उपन्यास बाहेक अरुहरुको पेन ड्राइभको एउटाएउटा आइटम पालैपालो लगाइदेऊ न त ! बरु जुकरवर्ग क्याफेका मेरा कथाहरु पनि लगाइदेऊ !” अश्विनी सरले पारिपारिसम्मको बाटो नियाल्दै आफ्नो इरादा मिसाउन भ्यासक्नुभएको छ ।
मैले पेनड्राइभहरुको साङ्लोबाट पालैपालो अडियो लगाइदिन्छु ।
“हेर भाइ यता । गाडी उकालोमा कुन गतिमा चलाउनुपर्छ, तेर्सोमा र ओरालोमा कसरी चलाउनुपर्छ ध्यान दिएर यता पनि हेर्दै गर । जे कुरामा लागेको छ तनमन त्यतै दिनुपर्छ अलिकति चुक्यो कि खत्तम ।“
मैले भने न त बजिरहेका कथा कवितातिर ध्यान दिनसकेको छु न त गुरुजीबाट निस्कने निर्देशनात्मक भनाइहरुतिर । म प्रकृति र धरातल हेर्नमै भुलेको छु यतिखेर र भन्छुः
“यो अरिङ्गाले फेदी । कृष्णभीरजस्तै एकताका पहिरो झरेकोझर्‍यै गरेर निकै दुःख दियो यसले ।“ गाडी पहाडको फेदीमा पुगेर खोला तर्दैछ ।
कथा कविता र निबन्धहरु बजिरहेका छन् । अमरसरको ध्यान भने त्यता छैन । एरफोन कानमा कोचेर आफ्नै दुनियामा विचरण गरिरहेको जस्ता छन् । कमलसर, विप्लवसर र युवराजसर अडियो सुन्दै समीक्षा गर्दै गर्नमा व्यस्त । गुरुजी पनि उहाँहरुको समीक्षा सुनेर बेलाबेलामा छोटाछोटा एकदुई प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ।
“यो टुनीबोट । यो एरियामा ठूलाठूला बस दुर्घटनाहरु भएका छन् ।“
“दुर्घटना नै निम्तिने खालको अवस्था त देख्दिन त म । बाटो फराकिलो नै छ र मोड पनि त्यतिविधि तीखा छैनन् ।“ गुरुजी आश्चर्य व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
“बाटोको कारणले नभई ब्रेक नै बिग्रिएका पुराना थोत्रा गाडीहरु र चालक तथा समितिको छिट्टै कमाउने लोभको प्रतिष्पर्धाले यतातिरको दुर्घटना हुने देखिन्छन् ।“ मेरो तर्कले स्वीकृतिसूचक अनुहारहरु देखिन्छन् ।
“अब यो लुहाम । यताबाट आउने ठूलो खोला ‘शारदा’ । सल्यानका अधिकांश खेतहरु सिंचित गर्ने मूख्य नदी । यसैको मुख्य मुहानदेखि उता शुरु हुन्छ रुकुम । हामी अब यो खोलालाई नछोडेर यसैको किनारैकिनार भएर रुकुमको सीमाना पुग्छौँ ।“
“भोक लागेको छैन कसैलाई ? कि कथा/कविताले नै पेट भरियो ?” अमरसरले भोक लागिसकेको छनक दिनुहुन्छ । अरुहरुको ध्यान अमरसरकै भनाइमा तानिएको देखिएको छ ।
“बल्ल त एक बज्दै छ । अब शितलपाटीतिर खाउँला खाजा त ।“ मैले थामथुम पार्न खोज्छु ।
“ए उसोभए रुकुम पनि पुग्न थालियो होला हैन ? नास्ता खानेबेला त रुकुम पुग्ने अनुमान थियो ।“ कमलसर अनुमान गर्नुहुन्छ ।
“रुकुम पुग्नलाई त एकतिहाइ बाटो पनि कटेको छैन ।“
“उसोभए रुकुम पुग्दा रातै पर्छ कि क्या हो ?” विप्लवसरले शंका व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
“सरासर गए त उज्यालोमै पुगिएला कि ।” म उहाँहरुको अत्यासलाई थामथुम पार्ने प्रयत्न गर्छु ।
हामी भोटेचौर हुँदै लान्ति पुग्छौँ ।
“सडक सुविधा नहुँदा रुकुमतिरबाट आउने बाटो यहीँ मिसिन्थ्यो ।“
“पहाडी बजार त ठूलै पो रहेछ । कुन बजार हो यो ?” लान्ति कटेपछि गुरुजीले अगाडिको बजारतिर औँल्याउनुहुन्छ । प्रतिक्षित बजार आइपुगेको आभाषले सबैका घाँटीहरु तनक्क तानिन्छन् ।
“शितलपाटी । एकछिन यतै रेष्ट गरौँ, चियाखाजा पनि खाऊँ ।“
“औधि थकाइ लाग्यो मलाई त, ज्यान पनि बुढिएछ कि क्या हो ? कतै यस्सो चिरिप्प पार्ने ठाउँतिर रोकौँ न अश्विनी सर ।“ युवराजसरले आफ्नो तलतल लुकाउन सक्नुहुन्न ।
“हुँदैन, हुँदैन । मेरो हातमा स्टेरिङ छ । मलाई मापसेमा पार्ने बिचार छ कि क्या हो ? मैले मात्र गाडी चलाउने ठेक्का लिएको हो र । पालैपालो सबैले चलाउनुपर्छ अब ।”
“यात्राको थकाइ बूढाहरुभन्दा पनि तन्नेरीलाई बढी लाग्छ क्या !” अमरसरको ठम्याई ।
“तपाईँ चारैजनाको उमेर उस्तैउस्तै होला तर युवराज सर त पूरा असी काटेजस्तै बूढो पो देखिनुहुन्छ त ?”
“उसोभए बढी थकाइ त कमलसरलाई लागेको हुनुपर्छ, ज्यान कति लामो छ भने कम्फर्टेबल सिट भको गाडीमा पनि नअटेका हातखुट्टा र जीउ फोल्ड गरेरै सिटमुनि कोच्नुपर्ने बाध्यता !” विप्लवसर पनि छेड हान्न माहिर हुनुहुन्छ ।
गाडी एउटा मीठाइ पसलमा गएर रोकिन्छ ।
“हेर न आजभोलिका चालकहरु ताल, भट्टीपसलतिर देखिने गुरुजी मीठाइपसलमा । यस्ता मीठाइप्रेमी गुरुजी !” विप्लव सर पनि मीठाइ पसलमा गाडी रोकिएकोमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने बुझियो ।
मैले यति संस्मरण लेखिसक्छु र अश्विनी कोइराला सरलाई मेसेन्जरको माध्यमबाट सेन्ड गरिहाल्छु । तल लेख्छुः
“माइन्ड नगर्नुहोला है सर मैले हजुरलाई ड्राइभरको भूमिका दिएको छु र आफूलाई खलासीको । यात्रीहरुलाई जिन्दगीमा पुग्दै नपुगेको ठाउँमा पुर्‍याउँदैछु है ।“
एकछिनपछि रिप्लाइ आउँछ
“अरु ठीक छ ।“
अब टुङ्ग्याउनतिर लागिहाल्नुस् ।“
“हामी अझै सल्यानको पुछारतिरै छौँ । यात्रीहरुलाई रुकुमसम्मै पुर्‍याउँछु भनी यहाँसम्मै ल्याइसकेपछि बीचमै छाड्न अलि नमिल्ला कि ?”
“ल ल बाँकी लेखेर पठाउनुहोस् ।“
खाजा खाइवरी शितलपाटीबाट गाडी पुनः अगाडि बढ्यो ।
“अब बायाँतिरबाट दश किलोमिटर जति माथि सल्यानको सदरमुकाम खलंगाबजार रहेको छ । दायाँतिरबाट अगाडि बढे करिब ८५ किमिको दूरीमा रुकुमको मुसीकोट पुगिन्छ ।“
“अझै पऽऽचाऽऽसीऽऽ किमि ? आम्मामामामामा……. आज पुगिँदैन कि क्या हो ?” कमलसर सशंकित देखिनुहुन्छ ।
पुनः कथा कविता र निबन्धको अडियो बज्न थाल्छ गाडीभित्र ।
“भयो अब भयो अडियो सुन्नलाई पनि । बरु आफै रचना गरौँ । चुट्किला लघुकथा मुक्तक आदि । जजसलाई मन पर्छ, सुनाऊँ हुन्न ?”
“बाहिरतिर पनि सबै उस्तै हो । टाढा केही देखिँदैन, उही खोला हेर्‍या छ, कुद्या छ वश् । हाम्रो गुरु पनि बेसरी खट्नुहुँदोरहेछ । गफसफ केही नगरी हाँक्या छ हाँक्या छ ।“ कमलजीको असन्तुष्टि छताछुल्ल हुन्छ ।
“मैले गाडी हाँक्नुमा मेरो स्वार्थ पनि लुकेको छ, कमलजी । म यताको प्रेमको बीउको रङ र आकार हेर्न चाहन्छु । त्यसको बीरुवा कस्तो हुन्छ नजिकबाट हेर्न चाहन्छु । त्यो कस्तो पाखामा हुर्कन्छ त्यो जान्न चाहन्छु । बीउको मुहान कहाँ छ त्यो कुरा बुझ्न चाहन्छु । यदि म यात्रीको भूमिकामा हुन्थेँ भने तपाईँहरु जस्तै निदाइरहेको हुन्थेँ र म यी कुराबाट बन्चित हुन्थेँ । मैले यी कुराहरु आँखा नझिम्क्याएर हेरिरहेको छु नि त ।” गुरुजीले कमलजीको नाममा सबै यात्रीहरुको ध्यान खिच्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ ।
गुरुजीको तर्कको प्रभाव के परिरहेको छ पछिल्तिर भनेर मैले टाउको मोडेर फर्किएँ । उहाँहरु त कुरा सुन्दासुन्दै झुङ्न थालिसक्नुभएछ ।
सल्यानको बरेला, ढोरचौर, चाख्लीघाट, पटारे, मोख्ला, कालाखेत, थारमारे, खरीबोट पछाडि छोड्दै रफ्तारमा गाडी कुदाइ नै रहनुभएको गुरुजीले । आफ्ना कुराहरु सुनिदिने यात्रीहरु नै निदाइसकेपछि गुरुजीले मलाई नै पढाउन थाल्नुभयो :-
“हेर भाइ, जिन्दगीका पाटाहरु हेर्ने आआफ्नै दृष्टि र आफ्नै कोण (एङ्गल) हुन्छ । म अगाडि छु र तिम्रो दायाँपट्टि छु । मेरोतर्फबाट नजिक आउने हरेक प्राणी र प्रकृतिबीचको प्रेमलाई म दायाँपट्टिबाट र प्रत्यक्ष अगाडिबाट देख्नसक्छु । तिमी देब्रेपट्टि छौ । तिम्रो हेराइ देब्रे हुनसक्छ । विप्लव र युवराज बीचमा बसेका छन्, उनीहरुले हेर्न सक्ने बीचको दृश्य हो । अमर र कमल पछाडि छन् । उनीहरु पछाडिबाट अगाडिको थोरै दृश्य हेर्न सक्छन् । पछाडि बसेकाहरुलाई अर्को के सुविधा छ भने उनीहरु पछाडि फर्केर पछाडिको दृश्य परपरसम्म हेर्न सक्छन् । ब्याकमिररबाट म पनि साइडमा आइसकेको कुरालई हेर्न त सक्छु । तर निरन्तर हेरिरहने सुविधा छैन मलाई । किनकि म चालक सिटमा बसेको छु र सधैँ सिधा अगाडि हेर्नुपर्छ ।“
मैले केही बुझेजस्तो र केही नबुझेजस्तो गरी टाउको हल्लाइरहन्छु ।
अब गाडी उकालो चढ्न थालेपछि विप्लव सर ब्युँझदै भन्नुहुन्छः “रुकुमको सिमाना शुरु भयो अब ? खोला छोड्नेबित्तिकै रुकुम शुरु हुन्छ भन्नुभएको हैन ?”
“छैन । मुसीकोट नै पुग्न त अझै दुई घण्टा लाग्छ । सानो डाँडा काटेर पुनः यही खोलामा मिसिन्छौँ हामी ।“
“यो ठाउँ त जताकतै उजाडैउजाड मात्र देखिन्छ त ।” हाम्रो कुराकानीले युवराजसरलाई पनि ब्यूँझाएछ ।
“रुकुमको सीमाना शुरु हुनेबित्तिकै हरियाली पनि शुरु हुन्छ सर । खोल्साखोल्साहरुमा पानीका मुहानहरु छन् । टाउको उचाल्ने बित्तिकै पूर्व उत्तर र पश्चिमतिर हिमाली श्रृङ्खलाहरु देख्न सकिन्छ । अब २० किलोमिटर पार गरेपछि रुकुमको सीमाना शुरु हुन्छ ।“
अब हामी शिवरथ पनि पछि पारेर बाङ्गेलाँकुरी पुगिसकेका छौँ । सिधा पूर्वतिर औँल्याउँदै भन्छुः “ऊ… त्यही हो रुकुमको सीमाना । त्यसलाई खौला भनिन्छ । त्यो भन्ज्याङ हो । भन्ज्याङलाई यताको भाषामा छेर्ना भनिन्छ । त्यसलाई खौलाउ छेर्ना भन्छन् यतातिरकाले ।“
बाङ्गेलाँकुरीमा एकछिन गाडी रोकेर सबै साथीहरु त्यतातिरको दृश्यमा लोभिन्छन् ।
“चिया नास्ता खाऊँ कि यतै ?”
“अब कति समयमा पुगिएला त्यो छेर्नामा ? दूरीमा पनि बट्टा लाग्ने ठाउँ रहेछ । एक किलोमिटर अनुमान गर्‍यो दश किलोमिटर पुग्दो रहेछ यतातिर त ।“ अमरसरले जिज्ञासा पोख्नुहुन्छ ।
“धेरै टाढा छैन, अब बाह्रतेह्र किलोमिटर जति होला ।“
“भोक त लागिसक्यो, के गर्ने होला ?” युवराज सरको अन्यमनस्कता ।
“तपाईँहरु त आरामसँग बस्नु मात्रै भएको छ । ड्राइभिङ गर्दागर्दा अनवरत मिहेनत त मेरो परेको छ । मलाई झन् कति भोक लागेको होला ?” गुरुजीले बिहानैदेेखिको आफ्नो जोशजाँगरलाई अनुमोदन गराउन खोज्नुहुन्छ ।
“खै अरुलाई ड्राइभिङको चान्स दिने होइन, हामी के भनम् त अब ?” कमलजीका हातले पनि ड्राइभिङ गर्न हात सकसकाए जस्तै बुझियो ।
“ल, ल दशबाह्र किमि मात्र भए त्यहाँ दशदेखि बीस मिनेटमा पुगिने देखियो । त्यहीँ पुगेर खाउँला ।”
“जाऊँ, जाऊँ !”
सबैको मिश्रित सहमति प्राप्त भयो गुरुलाई, “जाम्, जाम् !”
हामी सीमखोलीलाई पनि पछि पारेर उकाला घुम्तीहरु पार गर्दै माथि उक्लन थाल्यौँ ।
“के हो ? पारि गाडीहरुको त लामो लाइन देखिन्छ त ! के को जाम हो त्यो फेरि ?”
“त्यता अलि चिस्यान भइरहने ठाउँ हो । बर्खाले सबैभन्दा बढी त्यतैको बाटो बिगार्छ । गाडी पूरै डुब्ने हिलो छ । अगाडिको गाडी फस्यो होला हिलोमा ।“
“मारेन त अब ? कतिबेरसम्म रोकिनुपर्ने हो अब ?”
हामी केही बेरमा गाडी जाम भएको ठाउँमा पुग्छौँ । एउटा बोलेरो गाडी खुट्टा झिक्नै नसक्नेगरी फसेको छ ।
“केही चियासिया पाइन्छ यतातिर ?” भोक खप्न नसक्नेमा युवराजसर नै अगाडि देखिनुभएको छ ।
“के को चिया पाइनु यो जङ्गलमा ? अब कि त पाँच किलोमिटर जति तल सीमखोलीमै पुग्नुपर्छ, कि दुई किलोमिटर माथि जलेखर्क पुग्नुपर्छ ।“
अगाडि हिलो नै हिलो छ मान्छे हिड्न सक्ने अवस्था समेत छैन । अलिअलि ओबानो बचेको ठाउँमा अगाडिका गाडीहरुका यात्रुले ठेल्लम्ठेल छ ।
“अब स्काभेटर नआएर त्यो जीप उक्लन सक्दैन, कुन बेला आउला स्काभेटर ?” गाडी बीचबाटोमै रोक्दै गुरुजी दुवै हातले टाउको थिच्न थाल्नुहुन्छ ।
“मुसीकोटबाट आउन दुईघण्टा लाग्ला, शितलपाटीबाट पनि त्यस्तै लाग्ला ।“
“त्यो पनि खबर पुग्यो भने वा आयो भने त हो ! आएन भने त मारिहाल्यो नि !!”
“यत्रो यात्रीहरु छन् र सबै पर्खेरै बस्छन् त त्यतिन्जेल ।“
“अर्को उपाय पनि त छैन ।“
“ए भाइ, जाऊ तिमी अगाडिको अवस्था बुझ !”
“अगाडि गएर पनि के बुझ्नु र ? जे देखिएको छ त्यही त हो नि ।“ म अगाडि बढ्न जाँगर लाउँदिन ।
“जाऊ न जाऊ । जाऊ भनेपछि पनि नमान्ने कस्तो खलासी तिमी ?”
“त्यति बुझ्नलाई त अरु गए पनि त हुन्छ । जानुस् कमल सर तपाईँ ।“ मैले अह्राउन सक्ने बढीमा उहाँलाई नै हो ।
“आ ! त्यस्तो हिलोमा जाँदिन म । मेरा सेता लुगा बिग्रे भने को जिम्मेवार ? जानुहोस् अमर सर तपाईँ ।“
“अनि नयाँ लुगा तपाईँका मात्र छन् ? मेरा छैनन् ? जानुस् विप्लव सर तपाईँ ।“
विप्लव सर युवराज सरलाई घच्घच्याउनुहुन्छ, “जानुस् युवराजसर, बढी भोक तपाईँलाई नै लागेको छ क्यारे !”
“भोक नलागेको त को होला र यहाँ ? बेलुकाको खाना खाने बेला भइसक्यो नि । वारिपारि अँध्यारो हुन थालिसक्यो ।“
चालकको नाताले अश्विनी सर दायाँबायाँ चल्नै मिलेको छैन । के गर्ने अब गाडी पछाडि पनि फर्कँदैन । पछाडि पनि अरु गाडीहरु आएर रोकिइसकेका छन् ।
“जाऊ न जाऊ, अगाडि के भन्छन् बुझ न यार्, बरु पछाडि फर्कौँला ।” गुरुजी मलाई अगाडि जान बाध्य पारिरहनुभएको छ ।
म मन नलागी नलागी अगाडि बढ्छु । अगाडि बस, माइक्रो, जीप, ट्रक, ट्याक्टर गरी दशपन्ध्रवटा ठूला गाडीहरु र मोटरसाइकल एक दर्जनजति बीचमै तेर्सिएका छन् । पारिपट्टि पनि यतातर्फ सोझिएका त्यति नै गाडीमोटरहरु छन् ।
हर्क भाइको स्वर सुनेर झसङ्ग हुन्छुः “हेडसर ? तपाईँ यहाँ ? कताबाट आउनुभो ?”
भीमभाइ बोल्छन्, “पूर्ण दाइ, तपाईँ पनि यतै ?”
“कुन गाडीमा आउनुभो तपाईँ ?” म करैले आफ्नो गाडी देखाउँछु, “ऊ त्यही रातो जीपमा !”
चन्द्रा बोल्छिन्: “चिन्याचिन्या जस्तो त लाग्याथ्यो, दाइ हुनुहुन्छ कि भनेर । दाइ तुल्सीपुरमा मिलिक्क मिल्किहाल्नुभो । आखिर यो समस्या त सबैले भोग्नै पर्‍यो क्यारे अहिले ।” चन्द्राले मेरो व्यवहारको पैँचो फेर्ने अवसर भेट्टाइहालिन् ।
भावना पनि त्यतै रहिछन् थपिन्: “मेरो त चारमहिनाको बच्चा थियो । दाइ आफू जीपमा आउने भएपछि बच्चालाई मात्र भए पनि ल्याइदिनुपर्छ नि ! गाडीमा यसैसँग सिन्कीखाँदेको जस्तो भइयो । यो रुँदारुँदा अहिले यसरी झोक्राएको छ । दाइको मन यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिइन मैले ।“
अरुहरु पनि बोल्न थाले, “पूर्ण सर कता हो ?” मेरो चेहरा कालोबाट नीलोमा घनीभूत हुँदैछ । दिने उपयुक्त जवाफ केही पनि छैन मसँग ।
एकएकजनासँग दुईदुई सन्चोबिसन्चोको आदानप्रदान गर्दागर्दै समय बितेको पत्तै पाउँदिन म ।
“भाइ ! ए भाइ छिटो आऊ यहाँ ! कति कुरामा व्यस्त हो ?” गुरुजी कराउन थालिसकेका छन् । मैले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छु । आफ्नो यो यात्राको असली पहिचान खुल्दै छ । अब के भन्नेहुन् यिनीहरुले ।
“तपाईँ आएको गाडीको गुरुले कसलाई बोलाउँदैछ ? भाइ, भाइ, भनी घाँटी सुकाइरहेको छ अघिदेखि ।“
“खोइ ? होला कसैलाई ।” मैले परवाह गरेको छैन ।
“ए रातो सुरुवाल लगाउने बहिनी, तपाईँसँगै उभिने होचोहोचो त्यो भाइलाई यता पठाइदिनू न । कान फुटे कि क्या हो त्यसका ?”
बित्याँस परेन अब जे कुरा लुकाइरहेको छु त्यसको पोल खोलिदिँदैछन् गुरुजीले परिचितहरुका सामू । “दाइलाई नै हो कि क्या हो ।“ चन्द्रा चकित पर्दै बोलिन् ।
“भाइ ? यति बूढो मान्छेलाई किन भाइ भन्नुपरेको होला ?” हर्कले अर्को वक्र वाण हान्छन् ।
गुरुजी अब गाडी छोडेर मतिरै अगाडि बढ्न थाल्नुभयो ।
“मलाई त किन हुन्थ्यो र ? तर म गइदिन्छु त्यतातिर ।“ म फटाफट उनीहरुलाई छोडेर गाडीतिर लागेँ ।
मैले सामना गर्नुपरेको त्यो विडम्बनायुक्त परिस्थितिले मुखामुख गर्न थाले चिनेजानेकाहरुले ।
गाडी नजिक पुगेपछि गुरुजीले मलाई झम्टौँलाझैँ गरी भन्नुभोः “अर्काको ठाउँमा ल्याएर यसरी अलपत्र पार्ने ? अनि त्यत्रोबेरदेखि बोलाउँदा पनि आफूँचाँहि टेर्दै नटेर्ने ? के हो यो चाला ?”
“के भयो र गुरुजी ? के गर्नुपर्‍यो मैले ?” मैले पनि अलि कडा स्वर लगाउनै पर्ने भयो ।
“खै यो गाडीका यात्रीहरु ? गाडी रित्तो देखेनौ ? गाडी पछि चिप्लेला जस्तो भैराछ । टेकासोको लागि ठूलो ढुङ्गा खोजेर ल्याऊ ।”
“यतैकतै त हुनुहोला, किन आत्तिनुहुन्छ त्यसरी ? सबै गाडीका यात्रीहरु बाहिर ओइरिएका छन् । उहाँहरु अगाडितिर कतै देखिनुभएन, म पछाडितिर खोज्छु ।”
“कुरा सामान्य छैन । ‘पिसाब लाग्यो‘ भनेर पहिले युवराजजी पछिल्तिर जानुभो । उहाँ दशपन्ध्रमिनेटसम्म पनि नआएपछि हेर्न भनेर विप्लवजी जानुभो । उहाँ पनि नआएपछि अमर र कमलजी जानुभो । एक घण्टा बित्न थालिसक्यो कोही पनि फर्केर आएका छैनन् । फोनको टावर पनि लाग्दैन । के गर्ने अब ?” अँध्यारो हुँदै गएको वातावरणमा उहाँको अनुहार औधि अँध्यारो देखिएको छ ।
“म हेरिहाल्छु है त ।“ म दौडिँदै पछाडितिर गएँ । हामीभन्दा पछाडितिर उभिइरहेका यात्रीहरुका सबै अनुहारहरु कोट्याएर र छामेर हेरेँ । अँहँ कोही पनि फेला परेन । फेरि दौड्दै अघिल्तिर पुगेँ । अँध्यारो बढ्दै छ । हराएका साथीहरु कोही फेला परेनन् । प्रत्येक गाडीको भित्र छिरेर पनि हेरेँ । अँहँ कोही फेला परेनन् ।
अब मेरो म पनि आत्तिन थालेँ । कहाँ गए होलान् तिनीहरु ?
गाडीको जाममा पछिल्तिर थपिँदै जाने गाडीका सबै यात्रीहरुलाई चारैजनाको हुलिया दिएर सोधेँ । कसैले पनि देखेको भन्दैन ।
म निराश हुँदै फर्किएँ । गुरु रिस आवेग र चिन्ताको कोलाज भैसकेका थिए । अब त यति अँध्यारो भैसकेको थियो । को आफ्नो गुरु हो को अर्काको हो त्यही छुट्ट्याउन पनि मुश्किल ।
गाडीको नजिक गएर भनेँ, “गुरुजी कतै भेटिएनन् तिनीहरु । सबैलाई भोकले च्यापेको थियो तिनीहरु कि त सीमखोली नै पुगे, हैन भने पारितिरका घरहरुमा आश्रय लिन पुगेका पनि हुनसक्छन् । चिन्ता नगर्नुहोस् । स्काभेटरको आवाज सुन्नेबित्तिकै वा पेट भर्नेबित्तिकै अवश्य आउनेछन् । हामीलाई पनि खाना यतै ल्याइदेलान् ।“
उनी झण्डै डाँको छोड्लान् जस्तै बोलेः “चिन्ता उनीहरुको मात्र होइन, आफ्नो पनि हो र यो गाडीको पनि हो । यो गाडी यतै छोडेर जाउँ, जाम खुल्यो भने के गर्ने ? नजाऊँ यो गाडी रुङेर कति घण्टा बस्ने ? कति दिन बस्ने ? सोच्नै नसकेर म त हैरान भैसकेँ ।”
“तपाईँ गाडी नछोड्नुहोस् गुरुजी, तपाईँले नै छोड्नुभो भने मेरो गाडी चलाउने लाइसेन्स छैन । अलिअलि सिकेको मात्र हो । यो हिलोबाट उकासेर रातको बेला दुई किमि दूरीको जलेखर्कसम्म पनि पुर्‍याउन सक्दिन होला म । तपाईँ र म यही गाडीलाई कुरेर बसौँ । यत्रा यात्रीहरु बसिरहेका छन् । भोकलाई गोली मारिदिऊँ ।“
“अनि दाङबाट हिँड्दा भनेको होइन तिमीले बाटोभरि जति पनि पाइन्छ, यताको केही बोक्नुपर्दैन भनेर ? ड्राइफुड मात्रै ल्याएको भए पनि त भोकका कीरा मार्न हुन्थ्यो ।“
“यस्तो होला भन्ने थाहा भएको भए यहीँ पाँच किलोमिटर तल पनि त बजार थियो । त्यहीँबाट पनि त हाल्न सकिन्थ्यो ड्राइफुड । पर्‍यो यस्तो के गर्ने ?”
हाम्रो बातचित हुँदै थियो । मलाई खोज्दै आइपुगे अघिल्तिरका चीरपरिचितहरु । म छिटोछिटो गाडीमा छिरेँ र बत्ती निभाइदिएँ । उनीहरुले बोलाए पनि बोलिन ।
अब चिन्ता गर्नुको कुनै विकल्प थिएन । गुरुजी छट्पटिँदै हातखुट्टा सिटमा फैलाएर गाडीमै पल्टिराखे म पनि निशब्द पछिल्लो सिटमा घुस्रिरहेँ ।
करिब चार घण्टापछि स्काभेटर आइपुग्यो र केही प्रयासपछि पालैपालो अरु गाडीहरु पनि तान्न थाल्यो ।
बाटो खुल्ने भयो । सबै गाडीहरुले हर्न दिन थाले । यात्रीहरुको चहलपहल ह्वात्तै बढ्यो । तर हाम्रा यात्रीहरु अझै आइपुगेका छैनन् ।
“बाटो त खुल्यो अब के गर्ने ? जो हाम्रा मुख्य सेवाग्राही हुन् उनीहरु नै छैनन्” गुरुजी फेरि आत्तिए ।
“जाऊँ गुरुजी, बीचमा हामीलाई एकछि पर्खन दिँदैनन् अब । करिब दश किलोमिटर पर झुल्नेटा बजार छ । त्यहाँ फोन पनि लाग्छ । कोशिस गरौँला त्यतैबाट ।“
गाडी स्टार्ट गर्दै गुरु जङ्गिँदै बोलेः “हाम्रो मात्र फोन लागेर हुन्छ ? उनीहरुको नलागे के काम छ यो ठाँडोको ?”
“उनीहरु पनि फोन लाग्ने ठाउँमा पुगेका हुन सक्छन् नि !” म तर्क गर्न छोड्दिन ।
केही बोलेनन् उनी । हाम्रोभन्दा लगत्तै अगाडिको बस पनि अगाडि बढ्यो । गुरुजी अलमलमै थिए ।
पछाडिको गाडीले तारन्तार हर्न दिन थालेपछि अगाडि नबढी सुखै थिएन ।
सँगै आएका यात्रीलाई त्यतैकतै छोडेर हामी पनि अगाडि बढ्दै गयौँ । जलेखर्क पुगेपछि एकछिन रोकिए गुरुजी ।
“यताबाट पनि रुकुमको भाग देखिन्छ गुरुजी ।“ मैले चुक घोप्ट्याएको अँध्यारोतिर औँल्याए । उनले के देखे वास्ता गरिन । सायद पारितिरको भाग त के उनले मेरा औँला समेत देखेनन् होला ।
म ढुक्क थिएँ कि उनको क्रोधाग्नि मैले देख्नुपरेको छैन । बोलीले आक्रोस व्यक्त गर्नु पनि व्यर्थ छ भनी उनका चेत आइसकेको हुनुपर्छ ।
हामी अझै अगाडि बढ्यौँ ।
“यही हो गुरुजी खौलाको छेर्ना । यहाँदेखि सल्यानको भाग समाप्त भयो र रुकुमको हरियाली भाग शुरु भयो अब ।“ उनी केही बोलेनन् । एकछिन गाडी रोक्दै पछाडि फर्केर परपरसम्म हेरेर पुनः खुइए सुस्केरा हाले र पुनः गाडी अगाडि बढाउन थाले । उनी मौनतामा रमाउन खोजेका छन् । म मौनता चिर्न चाहन्छु ।
“आइपुग्यो गुरुजी, झुलनेटा यही हो । साइड लाउनुहोस् । अब हामी छुटेका यात्रीलाई यतै पर्खौँ ।“
गाडी घ्याच्च रोकियो । म हत्तपत्त गाडीबाट ओर्लिएँ ।
धेरै पर उत्तरपूर्वको डाँडोतिर बिजुलीबत्तिको झिलिमिलि देखिएको थियोः “ऊ त्यही हो मुसीकोट बजार । अझै पच्चीस किमि जति बाँकी छ त्यहाँ पुग्न ।“ मैले आफ्नो भूमिका निभाउन चुकिन ।
गुरुजी मैले औँल्याइरहेको ठाउँतिर हेर्दै थिए थिएनन् मैलै पनि वास्ता गरिन ।
“ऊ पारि क्षितिजतिर हेर्नुस् । उत्तरतिर सिस्ने हिमाल छ गुरुजी । हिउँ पग्लिसकेको हुँदा त्यो रातिमा देखिँदैन । पश्चिमतिर पनि हिमश्रृङ्खला छ । पूर्वतिर पुथा हिमाल छ । बादल नलागेको भए त्यो त अवश्य देखिन्थ्यो अँध्यारोमा पनि । त्योभन्दा वारिका पहाडहरुमा जताकतै हरियाली मात्रै छ । हरियाली रातको अँध्यारोमा देख्न सकिँदैन ।
अब त बाटो पनि राम्रो छ गुरुजी । अब त सुलुलुलुलु आधा घण्टामै पुग्न सक्छौँ मुसीकोट ।“
गुरुजीले चालकपट्टिको बत्ती पनि निभाइसकेछन् । सीसाको पर्दामा अँध्यारोको लेप लागेकोले भित्र केही पनि देखिएन । सीसा पूरै लगाइएकोले उनले मेरो कुरा सुन्नसकेका थिएनन् । मलाई भने भन्न मन लागिरहेको थियो: “गुरुजी हजुरसँग उज्यालोमा चलाएको ड्राइभिङको लाइसेन्स त छ तर अँध्यारो खोँचहरुमा डुबेका बाइरोडहरुमा ड्राइभिङ गर्न र आइपरे घण्टौँसम्म भोकभोकै धैर्य गर्नसक्ने लाइसेन्स पनि प्राप्त गर्नुपर्ने हो कि ?”
मैले खौलातिरबाट आउने एकएक गाडीलाई रोक्दै आफ्ना छुटेका यात्रीहरु खोजिरहेको छु । रातको दुई बजिसकेको छ । पसलहरु सबै बन्द छन् । खाना त के नास्ता समेत जुटेको छैन हाम्रो । म छुटेका साथीहरुलाई फोन लगाउने कोशिस गरिरहेको छु । सबैको फोनको रिप्लाइ एउटै छः “सम्पर्क हुन सकेन । पुनः प्रयास गर्नुहोला ।“
र म पनि पुनः प्रयास गर्ने प्रयत्नहरुबाट पछि हटेको छैन । कमलसरको फोन बल्लतल्ल उठ्छ ।
“कहाँ हराउनुभयो तपाईँहरु ? तपाईँहरु छुटेर हामीलाई कत्रो आपत परिसक्यो !”
“ल, ल, तपाईँहरुका आपतहरु पनि सुनौँला र हाम्रा आपतहरु पनि भेटेरै सुनाउँला । झुल्नेटा भन्ने ठाउँ छ रे, त्यतै पर्खनू । हामी यताबाट हिडिसक्यौँ ।“
“गाडीमा हो कि हिँड्दै ? हेलो !!! हेलो !!!” कुरा गर्दागर्दै फोन कटेको फेरि लाग्दै लागेन ।
म अब एकप्रकारको अपृय आतङ्कबाट मुक्त भैसकेको थिएँ । छुटेकाहरु भेटिने भएपछि भोकप्यास चिन्ता छटपटी अब गायब भैसकेको थियो ।
सायद हाम्रो बातचित सुनेर होला । गुरुजी झट्पट बत्ती बाल्छन् र कापीमा केही कोर्न थालेको देखिन्छन् ।
म हौसिँदै भन्छुः “भयो अब अँध्यारोको कथा नलेख्नुहोस् गुरुजी । अबको केही समयमा नै उज्यालो भइसक्नेछ । सायद अँध्यारोको अनुकुलतामा अँध्यारोको कविता विप्लव सरले पनि लेखे होलान् । अँध्यारोको निबन्ध युवराज सरले लेखे होलान् । अँध्यारोको उपन्यास अमरसरले तयार गरिसकेहोलान् । उनीहरुले लेखेका कथा कविताहरु हामी अँध्यारोको साम्राज्यमा मात्र हेर्नेछौँ र सुन्नेछौँ ।
अबको केहीबेरमै छुटेका साथीहरु आइपुग्दैछन् । अब यताबाट उज्यालोको कथा शुरु गर्नुपर्छ हामीले ।“
म ढोका खोल्दै पुनः थप्छुः
“अब तपाईँ मेरो सिटमा बस्नुहोस् गुरुजी र आरामसँग प्रेमका कथाहरु लेख्न शुरु गर्नुहोस् । तपाईँको अनवरत ड्राइभिङको पालो म दिन्छु अब । मैले पाइलापाइला चिनेको ठाउँमा मजाले यो गाडी हाँक्न सक्छु । मलाई यता लाइसेन्स कसैलै खोज्दैन ।“
मैले यति लेखेर अश्विनी सरलाई पुनः मेसेन्जरमा सेन्ड गरिदिएँ ।
फाइलको तल मेसेजमा लेखेँ :-
“यो मध्य भाग हो । निश्कर्ष भाग पछि पठाउनेछु ।”
रिप्लाइ आइसकेको छैन । म रिप्लाइ पर्खेर बसिरहेको छु ।
केही महत्त्वपूर्ण लिङ्क
महत्त्वपूर्ण टेलिफोन नम्बरहरू
विशेष खोजी Select Month May 2022 (2) March 2022 (1) February 2022 (1) January 2022 (2) December 2021 (46) November 2021 (10) September 2021 (4) August 2021 (2) July 2021 (4) June 2021 (2) May 2021 (2) April 2021 (1) March 2021 (1) February 2021 (1) January 2021 (2) December 2020 (1) November 2020 (2) September 2020 (36) June 2020 (1) May 2020 (2) April 2020 (10) March 2020 (13) January 2020 (1) September 2019 (2) August 2019 (8) July 2019 (5) June 2019 (1) May 2019 (1) April 2019 (10) March 2019 (2) January 2019 (6) December 2018 (1) October 2018 (6) September 2018 (7) July 2018 (2) March 2018 (2) December 2017 (5) November 2017 (1) October 2017 (2) August 2017 (1) July 2017 (10) March 2017 (1) February 2017 (3) January 2017 (3) December 2016 (3) November 2016 (6) October 2016 (9) September 2016 (10) August 2016 (35) July 2016 (40) March 2016 (1) February 2016 (2) January 2016 (3) December 2015 (32) November 2015 (25) October 2015 (20) September 2015 (81) August 2015 (97)
पाठकका पछिल्ला प्रतिक्रियाहरु
sell used magazines online on दिवंगत समयप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली
भेषराज रिजाल on दिवंगत समयप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली
Purna Oli on म.ले.प. फारामहरु
Tara Dhungana on म.ले.प. फारामहरु
Saan on म.ले.प. फारामहरु
Copyright © 2022 All Rights Reserved with : Purna Oli↑ - - - Log In - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Website Designed bY: CSS.com.np